मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलाई नेपाल प्रहरीले सलामी चढाउनु पर्ने बाध्यता के थियो ? – ekoshi.com
मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलाई नेपाल प्रहरीले सलामी चढाउनु पर्ने बाध्यता के थियो ?
मन्त्री अर्जुननरसिंहले घरमै यसरी लिए प्रहरीको सलामी !
सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले गृहजिल्लामा प्रहरीको सलामी लिएको पाइएको छ । कांग्रेस नेतासमेत रहेका उनले विदूरस्थित आफ्नै घरमा प्रहरीको सलामी लिएका हुन् ।
केसीले प्रहरीको सलामी लिँदै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा ‘गणतन्त्रका छोटे महाराजा’ भन्नेसम्मका टिप्पणी आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार पहिलो पटक विदूरस्थित घरमा केसी पुग्दा प्रहरीको एक टुकडीले सलामी दिएको हो । तस्बिरमा दुई ओटा घडासहितको रातो कपडा बिछ्याइएको घरको आगनमा केसी उभिएको देखिएका छन् भने अगाडीबाट प्रहरीको एक टुकडीले सलामी दिएको छ । उनी बिदूर पुग्दा घरमा नेपालको झण्डा समेत राखिएको थियो ।
गत आइतबारमात्रै केसी पश्चिमी नुवाकोटमा पर्ने तारुका गाविसको बडा नम्बर १ स्थित चौतारागाउँमा अवैध ढंगले निर्माण भएको गौरा–पार्वती सामुदायिक अस्पतालको भवन निर्माणमा हेलिकप्टरमा पुगेका थिए । मन्त्री अस्पताल उद्घाटमा गएको भन्दै त्यतिबेला पनि उनको आलोचना भएको थियो ।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी मन्त्री बनेका प्रेमबहादुर सिंहले पनि केसीले जसैगरी सलामी लिएको समाचारबाहिर आएका थिए । सिंह कालीकोट पुग्दा प्रहरीको एक टुकडीले सलामी दिएको थियो ।
१२ मङ्सिर २०७३
मधेशको सिमाको रक्षा कुनै पहाडेले होइन थारुमधिसेले गरेका हुन भन्दै त्रिपाठीले ओलीमाथि गरे व्यंग्य
मोर्चाले सरकार दिएको समर्थन फिर्ता लिने धमास दियो
‘ओलीजी होसियार’ भन्दै राप्रपा अधिबेसनमा देउवाले ओलीलाई दिए यस्तो चेतवानी
राजनितीमा इमान्दारिता हुन पर्यो – रामचन्द्र पौडेल
-योगेन्द्र गौतम कल्पना र भावना मा बगेको नेपाल को राजनिति भित्र बिदेशी प्रभुत्व र स्वदेशी लम्पसारबाद देखिनु कुनै नौलो कुरा होईन । राजनितिक क्षेत्रमा यक्ष ...